Murrashaxiinta Doorashada Keeba Wax Ka Qaban Kara Caqabadaha Ku Xeeran Jamhuuriyad Somaliland? | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Murrashaxiinta Doorashada Keeba Wax Ka Qaban Kara Caqabadaha Ku Xeeran Jamhuuriyad Somaliland?
June 13, 2017 - Written by Mustafe Faro
Sida aynu la wada socono dalkeena waxa ka jira xaaladu u baahan in la saxo,tusaale ahaan waxa manta dalkeena ka jira qanacsade aan waxba xidhin,madaxdhaqameed siyaasada ku dhex milmay oo dad qal ah amniga dalkana looga baqayo isagii ilaalin lahaa bulshadana islaax ka dhex dhalin lahaa, golihii wakiilada ee dadku soo doortay oo la shaqaysanaya xukuumadii uu dheeli tiri lahaa,wadaad ku dhex milmay siyaasada dhaqaale raadsiga ku dhisan.
Sidoo kale,gobalka geeska Africa iyo qacanka carbeed,waxa ka huraya colaado khatartooda iyo cabsidooda leh,una baahan in lagaga gaashaanto talo midaysan iyo hogaan adag. Si guud marka aynu u eegno caalamka aynu manta ku noolaha waxa ka jira khataro faro badan oo aynu bulshooyinka caalamka la wadaagno,haday tahay khataraha cudurada faafa,khataraha amni darada,khataraha isbadalka cimilada,khataraha ku lamaan tiknoolajiyada iyo isku furanka caalamka ( Digital technology and interconnectness), hoos u dhaca qiimaha khayraadka dabiicaga ah (fall ofcommodity prices),taasi oo saamaysay dalalka khaliijka ee aynu xoolaha u iib gayno.
Dhinaca kale Somaliland waxa horyaala fursado badan oo gudaheega ka jira sida in aynu ka faaidaysano khayraadka dhulkeena ku duugan bad iyo bariba,in aynu biyaha roobka ee bada gala farsamo u helo,in aynu dhaqaalaheena yar si wacan u maamulo,in aynu isku diyaarino in aynu wax ka iibino dalalka dadkoogu badan yihiin ee aynu la jaarka nahay ,iwm. Hadaba,su’aashu waxa weeyi,yaa Somaliland caqabadahaa ka saari kara,isabadalka la rabana ka dhalin kara?,labada murashaxa ee ugu cad cadi waa Muse Biixi Cabdi iyo Cabdirahmaan Cirro,hadaba labada keebaa dhalin kara isbadalka loo jeelan yahay?
1.Murashaxa xisbiga Wadani,Cabdiraham Cirro.
Mudane, cabirahaman Cirro waa Murashaxa Xisbiga Wadani,waxana uu ahaa 13 sanno ee u danbeeyay hogaamiyaha dhadhaar ka mid ah saddexda dhadhaar ee dawladu ka kooban tahay (fulinta,garsoorka,iyo sharci dajinta). Maadaaba oo uu dhadhaarkii sharci dajinta ku guuldarastay,waxba soo kordhin mayso in Madaxwayne laga dhigaa. Ta kale,nimanka imika Wadani imika ka tirsan sida Xirsi,Duur,Cabdirasaq khalif,Xuseen,Gedole,waa kooxdii wixii Kulmiye iyo Madaxwayne Siillanyo ka khaldamay masuulka ka ahaa,oo wax badan oo Kulmiye maanta gaadhi lahaana,adhaxda ka jabiyay. Sidaa daraadeed Cirro iyo kooxdaasi waa dadka ay tahay in dalka laga qabto si isbadal iyo horumar loo gaadho. Somaliland ooma baahna nin ay koox ay isku reer yihiin ku adeegato. Mudane Cirro,13 Sanno ee u danbeeyay waxa uu ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland,oo ah golaha laga curiyo shuruucda laf dhabarta u ah horumarka iyo dawladnimada Somaliland,golahaasi Cirro waxa uu ka dhigay Gole laga tukaamaysto (Shopping Center) oo ay ka tukaamaystaan danahoogana ka dhamaystaan kolba cidii dan ka lehi,isagoo Cirro dano shakhsi iyo dano siyaasadeed ku badashay waajibkii ka saaraa in uu ka guto mooshinada iyo sharciyada golaha la hor keeno.Waxa kale oo u ka gaabsaday in uu golohu xakameeyo golaha fulinta ee dawladeena,balse waxa uu isku furay labadii waaxood. Waxa ay dadka arrimaha golaha la socdaa ay sheegeen in si khaldan loo maamulo miisaaniyada golaha iyo hantida kale ee goluhu leeyahay.Safarada dibada uu ugu baxo Cirro waxa ay la xidhiidhaan danaha gaarka ah ee xisbigiisa Wadani(Conflict of interest) isagoo huwan shaadhkii golaha wakiilada.
Doorashooyinka iyo geedi socodka dimoqoraadiyada Somaliland waxa uu kaga jiraa kaalin laf jab ah,isagoo 13 sanno ee gudoomiyaha golaha ka ahaa aan maalin qudha ka hadal caqabadaha la xidhiidha doorashada baarlamaanka,taasi oo maanta xalkeega lagu dawakhsan yahay. Sidoo kale waxa uu cagajiid ku hayaa doorashada madaxtooyada oo uu aad ooga cabsi qabo.
2.Murashaxa Xisbiga Kulmiye,Muuse Biixi Cabdi,
Mudane,Muse biixi cabdi ,xukuumada Kulmiye dibada ayuu ka joogay,wixii Kulmiye ka khaldamayna Waxa ka danbaysay kooxdii Wasiirrada ahayd ee Wadani ku biirtay ee Xirsi horjoogah u ahaa . Muse,Xisbiga Kulmiye waxa uu kala soo dabaashay caqabado badan,waana shakhsi go’aan qaadasho leh,isbadalkuna kama maarmo go’aan qaadasho iyo hal adaygnimo. Muuse biixi marna looma tirin karo khaladaadkii ka dhacay dawladnimada Somaliland mudadii Kulmiye dalka haystay,waayo isagu xil xukaamada kama haynin,wixii khaldamayna isaguun baa sixi kara waayo isagu dabaduu ka joogay dawlada,halka Cirro iyo nimanka imika wadahadalka kula jiraa ay wax badan isku soo shubshubteen,dawlnimadna si wada jir ah ay nabaro waawayn ugu wada gaysteen. Marka wax la saxayo cid waxa khaldan dibada ka joogtay ayaa loo diraa sida Muse biixi oo kale.
Dalku waxa uu baahan yahay laf jabkii ay ku rideen Xirsi,Duur,Cirro,iyo Wadaad Cabdirasaaq khaliif,iyagaa sharci dajintii iyofulintii si wada jir ah u kufsaday,oogana faaidaystay awoodihii qaranka in ay hantida dalka boobaan,umada isku diraan,qabyaalada koriyaan,dalalka jaarka iyo Somaliland madax isku galiyay. Sidaa daraadeed dalku waxa uu u baahan yahay Cirro iyo kooxdaasi cidii ka badbaadin lahayd cidaasina aniga sida ay ila tahay waa Muse Bixi Cabdi,inkastoo uu ahaa gudoomiyaha Xisbul xaakimka hadana xukuumada Somaliland sida aad la wada socotaan waxay u afduubnayd kooxdaa Xirsi horboodayo oo wax ay ka dhageestaan Gudoomiye Muse iska daaye isaga dagaal kula jiray.
Ta kale Muse bixi ,wasiirada imika joogo mana magacaabo mana eryi karo,sidaa daraadeed wixii khalad ah ee ka dhaca isaga looma aanayn karo,isaga waxa loo aanayn karaa wasiiradiisa mustqabalka waxa ay khaldaan iyo sida uu ula xisaabto,imikana waxa lagula xisaabtimi karaa macquulnimada barnaamijkiisa,badheedhiisa,iyo sida uu runta uga sheeko xaaladaha inagu meersan gudo iyo dibadba.
WQ,MAXAMED DAHIR AXMED